Bildt: Ruushka siyaasad qatar ah buu ka wadaa Kaukasus - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Carl Bildt waxuu dhaleeceysanyahay midow kastam oo uu hogaaminayo Ruushka. Foto: Geert Vanden Wijngaert/Scanpix
Bildt: Ruushka siyaasad qatar ah buu ka wadaa Kaukasus
La daabacay onsdag 4 september 2013 kl 10.42
Wasiirka arimaha dibada Carl Bildt ayaa aad u dhaleeceysan dalka Ruushka oo cadaadis weyn ku haya waddamadii horey uga tirsanaan jirey Sovjet ee hada doonaya in ay xiriir dhow la yeeshaan midowga Yurub.
Waddanka Armeeniya waxuu cagta saarey dhabo qatar ah ayuu yeri wasiirka arimaha dibadda Carl Bildt oo ka hadlayey war fajac abuurey oo shaley ka soo baxay dalkaas kaas oo ahaa in waddankas kastamkiisa lala mideynayo kan dalka Ruushka. Taasna waxey keeneysaa in uu xumaado xiriirka dalkas iyo EU.
- Waa is-bedel lamo filaan ah oo hogaanka Armeeniya sameeyey. Waan arki doonaa waxey taas dhaliso. Laakiin waxaan aaminsanahey in uu wadankas hada cagta saarey dhabo qatar ah, waxaan sidoo kale aaminsanahey in ay tahay siyaasad qatar ah oo hada Ruushku ka ciyaarayo waddamda ku yaala Kaukasus. Sidaan qabo Ruushka waxuu dhaqaalo badan ku afuufey hub badana ka iibiyey waddanka Azerbaijdzan taas oo Armeeniya gelisey xaalad dhib badan ama ka cabsiisey Armeeniya kuna qasabtey in ay amni dartiis ku tiirsadaan Ruushka ayuu yeri Carl Bildt